Global Voices teny Malagasy » Gabon: Mety hampikorontana ny fanesorana ny zon’ny depiote tsy ho azo samborina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Mey 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Julie Owono Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Gabòna, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Misoko mangina ny krizy ara-politika sy ara-tsosialy any Repoblika anivon'i Afrika Gabon nanomboka ny 26 janoary 2011 . André Mba Obame, filohan'ny antoko mpanohitra “Union Nationale” izay efa voarara, no nanao ny fianianany fa izy no filohan'ny firenena, nanamafy hatrany izy fa izy no mpandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny volana jona 2009 saingy i Ali Bongo no nandresy ara-pomba ofisialy, izay zanaka lahin'ny filoha teo aloha Omar Bongo.
Nihamafy hatrany ny krizy nanomboka hatreo, nisy ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra  sy ny mpiasan'ny solika  vao haingana, na dia teo aza ny fivoahan'i  Mba Obame tao amin'ny tranon'ny PNUD (Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana), toerana izay nokasainy hialokalofana mandritra ny iray volana.
Fanesorana ny zon'ny solombavahoaka tsy azo samborina
Tamin'ny 5 may, Mba Obame, izay sady solombavabahoaka ao amin'ny parlemanta Gabonezy, no nahita ny fanesorana ny zony  tamin'ny alalan'ny latsabato nataon'ny antenimieram-pirenena, satria voampanga olona ambony namadika (ny fireneny).
Noraketina fa ho ny 4 may no nokasaina hanatanterahana ny fombafomba tao amin'ny antenimieram-pirenena saingy nafampana ny toe-draharaha, mpanohana an-jatony an'i M. Mba Obame no nanao fihetsiketsehana mba haneho ny fanohanany an'ilay olona heveriny fa tena filohany. Nivory teo anoloan'ny lapan'ny Atenimieram-pirenena ao Libreville, renivohitra ao an-tanàna izy ireo mba hanery ny filohan'ny Antenimieram-pirenena hanemotra ny fotoam-pivoriana , izay nohodidinin'ny miaramila,.
Jean-Pierre Rougou, mpitolona gabonezy, namoaka sary sasantsany  tamin'io fihetsiketsehana io :
Fiaran'i Mba Obame, teo anoloan'ny Antenimieram-pirenena ao Libreville, nohodidin'ireo mpanohana azy. Sary avy amin'i Jean-Pierre Rougou.
Miaramila manatrika ny fihetsiketsehana eo anoloan'ny Antenimieram-pirenena ao Libreville. Sary avy amin'i Jean-Pierre Rougou.
Tao amin'ny tranokala La voix du peuple Gabonais (Feon'ny vahoaka Gaboney), maherin'ny 138 ireo fanehoan-kevitra nalefa tamin'ny lahatsoratra  milazalaza ny toe-draharaha. Araka ny hevitry ny iray amin'izy ireo, AMO Advocat, ny ady an-trano no mety ho vokatry ny fisamborana mety atao amin'i Mba Obame:
[…] Avelao i Boukoubi [sekretera jeneraly ny filohan'ny antoko] hisambotra an'i AMO [André Mba Obame] raha sahy izy sy ny lehibeny. Saingy ny vokatr'izany dia ny fisian'ny ady an-trano tsy mifaditrovana.
Nilaza i Mba Obame fa ny fanesorana ny zony tsyho azo samborina dia misy ambadika politika ataon'ny governemanta Gaboney izay mikendry ny famotehana azy eo amin'ny sehatra politika .
Nanome fanazavana hafa momba ilay latsabato ireo solontena tao amin'ny Antenimieram-pirenena. Araka ny filazan'ilay solombavambahoaka Jean Christophe Mbiguidi Dinga, izay nitarika ny vaomiera manokana nisahana ity raharaha ity, navoakan'ny tranonkala infosgabon  , fa “ahafahan'i Mba Obame manome fanazavana eo anatrehan'ny lalàna” ny fanesorana ny zony tsy ho azo samborina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/05/12/17392/
 26 janoary 2011: https://globalvoicesonline.org/2011/01/26/gabon-opposition-leader-takes-oath-as-new-president/
 mpiasan'ny solika: http://www.ft.com/cms/s/0/ad8f3940-5ee5-11e0-a2d7-00144feab49a.html#axzz1IRdAmN5B
 namoaka sary sasantsany: http://jp-rougou.blogspot.com/2011/05/gabon-lambiance-lassemblee-nationale.html
 famotehana azy eo amin'ny sehatra politika: http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110505192208/